सावधान ! झुकिएर पनि नराख्नुहोस् फेसबुकमा यस्ता गोप्य कुरा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ असार २०७६, बिहीबार १८:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक नचलाउने को होला र अचेत ? प्राय मानिसले फेसबुक चलाइरहेका हुन्छन् । इन्टरनेट अनिवार्य साधन भइसकेको हुनाले यस्ता सामाजिक सञ्जालले कुराकानीलाई सजिलो र सस्तो पनि बनाइदिएको छ।
संसारभर घटेका घटनाहरु मात्र नभइ टाढा रहेका आफन्तसँग क्षणभरमै भिडियोमा कुराकानी गर्न सकिन्छ। घरबाटै काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ । सजिलोसँगै अप्ठ्यारा र जीवनमा सरलता ल्याउने इन्टरनेटकै बाटोबाट भित्रिने जटिलता पनि छन् ।
समाजिक सञ्जालमा सन्देशहरु प्रवाह गर्दा सामान्य होसियारी अपनाउँदा इन्टरनेटकै कारण हुन सक्ने जोखिम कम हुन्छ । फेसबुक या सामाजिक सञ्जालमा बिर्सेर पनि आफ्नो पे चेक, क्रेडिट कार्ड, अनलाइन खरिद बिल र बैंक एकाउन्टका तस्वीर पोष्ट गर्नुहुँदैन । यदि तपाइँले यसो गर्नुभयो भने निकै ठूलो गल्ती हुनसक्छ ।
तपाइँले पोष्ट गरेको तस्वीरका आधारमा कम्प्युटर ह्याकरले तपाइँको बैंक एकाउन्टमा रहेको पैसा समेत चोर्न सक्छन् । त्यसैले बिर्सेर पनि निजी जानकारी फेसबुक या अन्य सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु हुँदैन ।
के कस्ता कुरामा ध्यान दिने ?
फोन नम्बरः मोबाइल नम्बर तुरुन्त हाइड गर्नुहोस् । फेसबुक पेजमा कहिले पनि फोन नम्बर नहाल्नुहोस् । मानिसहरुले यसका गलत फाइदा ढिलो चाँडो तपाईंबाट उठाउने छन् ।
जन्मदिनः ह्याकरले तपाईंको जन्मदिनले नै तपाईंको निजी जिन्दगीमा खलबली मच्चाइदिन सक्छन् । यसमार्फत उनीहरु तपाईंको बैंकसम्म पुग्न सक्छन् र तपाईंले निकै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तविक साथीलाई मात्र फेसुबकमा प्रवेशः अपरिचित मानिसहरुको फ्रेन्ड रिक्वेष्ट कहिले पनि एसेप्ट नगर्नुहोला । आफ्नो चिनजानका साथीलाई मात्र यहाँ राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
रिलेसनशीप स्टाटसः यदि तपाईं कोही मानिसको प्रेममा हुनुहुन्छ अथवा कसैसँग ब्रेकअप भएको छ भने यस्ता कुराहरु फेसबुकमा समावेश नगर्नुहोस् । अरुले फाइदा उठाउनेछन् ।
आफ्नो बोसलाई नजोड्नुहोस्ः यो तपाईंको पर्सनल स्पेश हो । तपाईंको कुरा तपाईंको बोसलाई नराम्रो लाग्न सक्छ जसका कारण तपाईंले अफिसमा झेल्नुपर्ने हुनसक्छ ।
पारिवारको तस्बिर नराख्नुहोस्ः यस्तो गर्दा तपाईंले आफ्नो दुश्मनहरुलाई पनि आफ्नो परिवारसम्म पुर्याइरहनु भएको छ । परिवारको तस्बिर हाल्न तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् ।
वीरगञ्जको सुन पसलमा प्रहरीको छापा
काठमाडौं । प्रहरीले पर्साको वीरगञ्जमा रहेको एक सुन पसलमा छाापा मारेको छ । ठूलो परिमाणमा अवैध रकम राखिएको आशंकामा…
काठमाडौँ । एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा फोन गर्दा ५ सेकेन्डभित्र फोन लाग्नुपर्ने नियम छ । नेपालमा चलेका दुई सेवा…
रोल्पा । बुधबार बिहानै घामको झुल्कोसँगै विद्यालयको हातामा कालो बोका बाँधियो । शक्तिशाली भनिएका धामीहरुले फूल–अक्षतालगायत झारफुकका सामग्री तयार…
शसस्त्र पुनः संरचना प्रस्ताव विवाद, असन्तुष्टि राख्दै संयोजक बिदा बसे !
काठमाडौं । डेढ साताआघि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका ‘पहुँचवाला’ लाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सशस्त्र प्रहरी बलले संगठनको संरचनामै…